ကမ္ဘာအနှံ့က နာမည်ကျော် ခရစ္စမတ်စ်ဟင်းလျာများ - For her Myanmar
ကမ္ဘာအနှံ့က နာမည်ကျော် ခရစ္စမတ်စ်ဟင်းလျာများ
ဟယ်… အဲ့လို အသည်းယားစရာကောင်းတဲ့ ဟင်းတွေ ပါမယ်လို့ မို့ ထင်မထားဘူး 😛
ယောင်းရေ ခရစ္စမတ်စ်ဆိုတာနဲ့ ဘာကို အရင်ဆုံးမြင်မိလဲဟင်? ခိုင်ဇာလို Foodie ကတော့ ဆန်တာကလော့တွေ၊ ခရစ္စမတ်စ် သစ်ပင်တွေ အရင်မမြင်ဘဲ ခရစ္စမတ်စ်မှာ စားကြတဲ့ အစားအစာတွေကို အရင်တွေးမိတာပါပဲ.. ခိုင်ဇာ့လို တွေးမိတဲ့ ယောင်းလေးတွေလည်း ရှိမယ်ထင်တယ်နော်..
ဒီလို ခိုင်ဇာနဲ့ အကြိုက်ချင်းတူကြတဲ့ Foodie ယောင်းတို့အတွက် သွားရည်ယိုစရာ ကမ္ဘာအနှံ့က နာမည်ကျော် ခရစ္စမတ်စ် ဟင်းလျာတွေအကြောင်း ခိုင်ဇာ ဝေမျှပေးမယ်နော်..
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ အထင်ကရ နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့ ခရစ္စမတ်စ်နေ့မှာ နိုင်ငံအလိုက် ခရစ္စမတ်စ် ညစာအဖြစ် သူတို့ ဘာတွေစားကြလဲဆိုတော့….
ဆွီဒင်လူမျိုးတို့ရဲ့ ခရစ္စမတ်စ်ညစာမှာတော့ အဓိကအားဖြင့် ဝက်ပေါင်ကျပ်တင်ကို ပြုတ်ပြီး ကြက်ဥ ၊ ပေါင်မုန့်ခြောက်၊ မုန်ညင်းဆီနဲ့ ပြန်ချက်ထားတဲ့ဟင်းကို အဓိက စားကြပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျပ်ခိုးတိုက်ထားတဲ့ အသားကင်၊ ငါးပြုတ် နဲ့ ဂေါ်ဖီထုပ်အရသာ ဟင်းအနှစ်တို့ ပါဝင်ပြီး ဆောင်းတွင်းမှာ သောက်တဲ့ Mulled Wine ဆိုတဲ့ ဝိုင်တစ်မျိုးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
၂။ Puerto Rico
ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ဝက်ကောင်လုံးကင်ကို မိသားစုစုံစုံလင်လင်နဲ့ ဝိုင်းဖွဲ့စားသောက်ကြပါတယ်တဲ့ ယောင်းတို့ရေ… ဝက်ကောင်လုံးကင်နဲ့အတူ အုန်းနို့၊ နို့ဆီ နဲ့ ရမ်အရက်တို့ ပါဝင်တဲ့ ယမကာ တစ်မျိုးကိုလည်း သောက်ကြပါတယ်။ နောက်ထပ်ယမကာတွေ ဖြစ်တဲ့ La Danza သို့မဟုတ် ရှန်ပိန် တို့ကိုလည်း အသီးတွေထည့်ပြီး သောက်ကြပါတယ်။
Related Article >>> ခရစ်​စမတ်​လက်​​ဆောင်​ သီချင်းဆို​နေတဲ့အရုပ်​​လေးလုပ်​ကြရ​အောင်​
ငါးဆားရည်စိမ်နဲ့ အာလူးဟင်းကို ခရစ္စမတ်စ် ညစာအဖြစ် ချက်ပြုတ်စားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိကကတော့ အချိုပွဲတွေပါ ယောင်းတို့ရေ။ အချိုပွဲအတွက် ကိတ်တွေမှာ အစေ့အဆံတွေ၊ ပျားရည်၊ သစ်သီးယိုတွေ၊ စပျစ်သီးခြောက်တွေပါဝင်ပြီး အမျိုးအစားများစွာ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ နာမည်ကျော်စားစရာတစ်ခုက ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးကို ခရစ္စမတ်စ်ကာလမှာ သိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ ၁၉၇၄ ခုနစ်တည်းက ခရစ္စမတ်စ်ကာလဆိုရင် KFC ကြက်ကြော်တွေကို အရောင်းမြှင့်တင်ရေးတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် နှစ် ၄၀ ကြာသွားခဲ့ပေမဲ့ အခုချိန်အထိ ခရစ္စမတ်စ်အချိန်ဆိုရင် KFC ကြက်ကြော်ဆိုင်တွေမှာ ဂျပန်မိသားစုတွေ ကြက်ကြော်၊ ရှန်ပိန် ၊ ကိတ်မုန့် တို့နဲ့ ပျော်ရွှင်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။
Lithuania ၊ ပိုလန် နဲ့ ယူကရိန်း နိုင်ငံတွေမှာ ခရစ္စမတ်စ်ညဆိုရင် ဟင်းပွဲ ၁၂ မျိုး တည်ခင်းစားသောက်ကြပါတယ်။ ဟင်းပွဲတွေမှာ အသား၊ ကြက်ဥ နဲ့ နွားနို့တွေ အများကြီး ပါပါတယ်။ ဟင်းပွဲတွေကို စားသောက်တဲ့နေရာမှာ ရှိထားတဲ့ အစဉ်အလာတစ်ခုကတော့ ဟင်းပွဲတွေကို တစ်ခုမှ မကျန်အောင်စားသောက်ရမယ် ဆိုတာပါပဲ။ တကယ်လို့များ မစားဖြစ်တဲ့ ဟင်းပွဲရှိခဲ့ရင် အဲဒီ မစားလိုက်တဲ့လူဟာ နောက်နှစ်မှာ အသက်ဆုံးပါးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆရှိပါတယ်။
ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ ခရစ္စမတ်စ်ညစာကို ကွတ်ကီးတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ခရင်မ်တွေ အများကြီးပါတဲ့ ကွတ်ကီး အိမ်လေးပြုလုပ်ပြီး စားသောက်ကြပါတယ်။ အချိုမကြိုက်တဲ့ သူတွေကတော့ မုန်လာရွက်စွပ်ပြုတ်၊ ဘဲကင်၊ ဖက်ထုပ်စတာတွေကို စားကြပါတယ်။
Related Article >>> လွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့ ကန်စွန်းဥ မုန့်လုပ်နည်း (၃) မျိုး
အသည်းငယ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ နော်ဝေနိုင်ငံရဲ့ ခရစ္စမတ်ညစာကို စားရဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သိုးခေါင်းကို ရေနွေးငွေ့နဲ့ ပေါင်းထားတဲ့ ဟင်းလျာကို အဓိကစားကြပါတယ်။ မျက်လုံးနဲ့ နားရွက်တွေကို အရင်ဆုံးစားရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆရှိပါတယ်။ ဦးနှောက်ကိုတော့ သီးသန့်ဖယ်ထားပြီး အပြုတ် ဒါမှမဟုတ် အကြော်ပုံစံ ပြန်ချက်စားကြပါတယ်။
ဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေကတော့ ၂၁ ရာစုရဲ့ USA အုပ်စုထဲမှာ အကြီးဆုံး အုပ်စု တွေဖြစ်တာကြောင့်များလားတော့ မသိပါဘူး။ ခရစ္စမတ်စ်အချိန်ဆိုရင် အမေရိကန်ဂျူးတွေကို နယူးယော့ခ်မြို့ရဲ့ Chinatown (တရုတ်တန်း) မှာ အများဆုံး တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ တခြားဆိုင်တွေက ပိတ်ပေမဲ့ တရုတ်စားသောက်ဆိုင်တွေက ဖွင့်နေသေးတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခရစ္စမတ်စ်ချိန်ဆိုရင် အမေရိကန်ဂျူးတွေက တရုတ်နဲ့ အနောက်တိုင်းပုံစံရောနှောနေတဲ့ ဟင်းလျာတွေကို စားကြတယ်ဆိုရင်တော့ မမှားနိုင်ဘူး ထင်ပါတယ်နော်…
ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ခရစ္စမတ်စ် ညစာကို အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေကို ဝယ်ကျွေးကြပါတယ်။ ညစာစားပြီးတဲ့အခါမှာ ရိုးရာအနေနဲ့ ဝေလငါး အဆီကို စားကြပါတယ်။ ဝေလငါးအဆီရဲ့ အရသာက အုန်းနို့လို အရသာမျိုးဖြစ်ပြီးအရမ်းမာလို့ ဝါးစားလို့မရဘဲ ဒီအတိုင်းမျိုချကြရပါတယ်။ နောက်ထပ်အစားအစာတစ်ခုကတော့ Kivaik ဆိုတဲ့ ဟင်းတစ်မျိုးပါ။ ဒီထူးဆန်းတဲ့ဟင်းက auk ဆိုတဲ့ ငှက်ကလေး အကောင် ၅၀၀ ကနေ ၃၀၀၀ လောက်ကို အရေခွံဆုတ်ပြီး ပင်လယ်ဖျံသားရေထဲ လနဲ့ချီ ထည့်သိမ်းထားရတဲ့ အစားအစာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွီဒင်မှာတော့ အိမ်ရှင်မတွေ အလုပ်ရှုပ်သက်သာစေမယ့် Game ဆိုတဲ့ စည်သွပ်ဘူးကို စားကြပါတယ်။ ခရစ္စမတ်စ်ညမှာ စားလေ့ရှိတဲ့ ဟင်းလျာတွေဖြစ်တဲ့ ကြက်ဥမွှေကြော်၊ အစာသွပ်မုန့်၊ အသီးအရွက်ဟင်း ကနေ ပူတင်းအထိ အကုန်လုံးကို တစ်လွှာချင်းစီထည့်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေလိုက်လေခြင်းနော်။
စာဖတ်ရင်း ဗိုက်ဆာသွားလားဟင်… ယောင်းတို့ အကြိုက်ဆုံး ခရစ္စမတ်စ်အစားအစာလေးကို လည်းပြောပြခဲ့ဦးနော်။
စမ်းချောင်းသူ ခိုင်ဇာ (For Her Myanmar)
References : Eatwith , Independent
ဟယျ… အဲ့လို အသညျးယားစရာကောငျးတဲ့ ဟငျးတှေ ပါမယျလို့ မို့ ထငျမထားဘူး 😛
ယောငျးရေ ခရစ်စမတျဈဆိုတာနဲ့ ဘာကို အရငျဆုံးမွငျမိလဲဟငျ? ခိုငျဇာလို Foodie ကတော့ ဆနျတာကလော့တှေ၊ ခရစ်စမတျဈ သဈပငျတှေ အရငျမမွငျဘဲ ခရစ်စမတျဈမှာ စားကွတဲ့ အစားအစာတှကေို အရငျတှေးမိတာပါပဲ.. ခိုငျဇာ့လို တှေးမိတဲ့ ယောငျးလေးတှလေညျး ရှိမယျထငျတယျနျော..
ဒီလို ခိုငျဇာနဲ့ အကွိုကျခငျြးတူကွတဲ့ Foodie ယောငျးတို့အတှကျ သှားရညျယိုစရာ ကမ်ဘာအနှံ့က နာမညျကြျော ခရစ်စမတျဈ ဟငျးလြာတှအေကွောငျး ခိုငျဇာ ဝမြှေပေးမယျနျော..
ကမ်ဘာတဈဝှမျးလုံးက ခရဈယာနျဘာသာဝငျတှရေဲ့ အထငျကရ နတေ့ဈနဖွေ့ဈတဲ့ ခရစ်စမတျဈနမှေ့ာ နိုငျငံအလိုကျ ခရစ်စမတျဈ ညစာအဖွဈ သူတို့ ဘာတှစေားကွလဲဆိုတော့….
ဆှီဒငျလူမြိုးတို့ရဲ့ ခရစ်စမတျဈညစာမှာတော့ အဓိကအားဖွငျ့ ဝကျပေါငျကပျြတငျကို ပွုတျပွီး ကွကျဥ ၊ ပေါငျမုနျ့ခွောကျ၊ မုနျညငျးဆီနဲ့ ပွနျခကျြထားတဲ့ဟငျးကို အဓိက စားကွပါတယျ။ နောကျပွီး ကပျြခိုးတိုကျထားတဲ့ အသားကငျ၊ ငါးပွုတျ နဲ့ ဂျေါဖီထုပျအရသာ ဟငျးအနှဈတို့ ပါဝငျပွီး ဆောငျးတှငျးမှာ သောကျတဲ့ Mulled Wine ဆိုတဲ့ ဝိုငျတဈမြိုးလညျး ပါဝငျပါတယျ။
ဒီနိုငျငံမှာတော့ ဝကျကောငျလုံးကငျကို မိသားစုစုံစုံလငျလငျနဲ့ ဝိုငျးဖှဲ့စားသောကျကွပါတယျတဲ့ ယောငျးတို့ရေ… ဝကျကောငျလုံးကငျနဲ့အတူ အုနျးနို့၊ နို့ဆီ နဲ့ ရမျအရကျတို့ ပါဝငျတဲ့ ယမကာ တဈမြိုးကိုလညျး သောကျကွပါတယျ။ နောကျထပျယမကာတှေ ဖွဈတဲ့ La Danza သို့မဟုတျ ရှနျပိနျ တို့ကိုလညျး အသီးတှထေညျ့ပွီး သောကျကွပါတယျ။
Related Article >>> ခရဈစမတျလကျဆောငျ သီခငျြးဆိုနတေဲ့အရုပျလေးလုပျကွရအောငျ
ငါးဆားရညျစိမျနဲ့ အာလူးဟငျးကို ခရစ်စမတျဈ ညစာအဖွဈ ခကျြပွုတျစားကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဓိကကတော့ အခြိုပှဲတှပေါ ယောငျးတို့ရေ။ အခြိုပှဲအတှကျ ကိတျတှမှော အစအေ့ဆံတှေ၊ ပြားရညျ၊ သဈသီးယိုတှေ၊ စပဈြသီးခွောကျတှပေါဝငျပွီး အမြိုးအစားမြားစှာ ပွုလုပျကွပါတယျ။
ဂပြနျနိုငျငံမှာတော့ နာမညျကြျောစားစရာတဈခုက ဈေးကှကျတဈခုလုံးကို ခရစ်စမတျဈကာလမှာ သိမျးပိုကျထားတယျလို့ ပွောရမှာပါ။ ၁၉၇၄ ခုနဈတညျးက ခရစ်စမတျဈကာလဆိုရငျ KFC ကွကျကွျောတှကေို အရောငျးမွှငျ့တငျရေးတှေ ပွုလုပျခဲ့ပါ တယျ။ ဒါကွောငျ့ နှဈ ၄၀ ကွာသှားခဲ့ပမေဲ့ အခုခြိနျအထိ ခရစ်စမတျဈအခြိနျဆိုရငျ KFC ကွကျကွျောဆိုငျတှမှော ဂပြနျမိသားစုတှေ ကွကျကွျော၊ ရှနျပိနျ ၊ ကိတျမုနျ့ တို့နဲ့ ပြျောရှငျနတောကို တှရေ့မှာပါ။
Lithuania ၊ ပိုလနျ နဲ့ ယူကရိနျး နိုငျငံတှမှော ခရစ်စမတျဈညဆိုရငျ ဟငျးပှဲ ၁၂ မြိုး တညျခငျးစားသောကျကွပါတယျ။ ဟငျးပှဲတှမှော အသား၊ ကွကျဥ နဲ့ နှားနို့တှေ အမြားကွီး ပါပါတယျ။ ဟငျးပှဲတှကေို စားသောကျတဲ့နရောမှာ ရှိထားတဲ့ အစဉျအလာတဈခုကတော့ဟငျးပှဲတှကေို တဈခုမှ မကနျြအောငျစားသောကျရမယျ ဆိုတာပါပဲ။ တကယျလို့မြား မစားဖွဈတဲ့ ဟငျးပှဲရှိခဲ့ရငျ အဲဒီ မစားလိုကျတဲ့လူဟာ နောကျနှဈမှာ အသကျဆုံးပါးနိုငျတယျဆိုတဲ့ အယူအဆရှိပါတယျ။
ဂြာမနီနိုငျငံမှာ ခရစ်စမတျဈညစာကို ကှတျကီးတှနေဲ့ ပွုလုပျထားပွီး ခရငျမျတှေ အမြားကွီးပါတဲ့ ကှတျကီး အိမျလေးပွုလုပျပွီး စားသောကျကွပါတယျ။ အခြိုမကွိုကျတဲ့ သူတှကေတော့ မုနျလာရှကျစှပျပွုတျ၊ ဘဲကငျ၊ ဖကျထုပျစတာတှကေို စားကွပါတယျ။
Related Article >>> လှယျကူမွနျဆနျတဲ့ ကနျစှနျးဥ မုနျ့လုပျနညျး (၃) မြိုး
အသညျးငယျတဲ့သူတှဆေိုရငျတော့ နျောဝနေိုငျငံရဲ့ ခရစ်စမတျညစာကို စားရဲမှာမဟုတျပါဘူး။ သိုးခေါငျးကို ရနှေေးငှနေဲ့ ပေါငျးထားတဲ့ ဟငျးလြာကို အဓိကစားကွပါတယျ။ မကျြလုံးနဲ့ နားရှကျတှကေို အရငျဆုံးစားရမယျဆိုတဲ့ အယူအဆရှိပါတယျ။ ဦးနှောကျကိုတော့ သီးသနျ့ဖယျထားပွီး အပွုတျ ဒါမှမဟုတျ အကွျောပုံစံ ပွနျခကျြစားကွပါတယျ။
ဂြူးလူမြိုးတှနေဲ့ တရုတျလူမြိုးတှကေတော့ ၂၁ ရာစုရဲ့ USA အုပျစုထဲမှာ အကွီးဆုံး အုပျစု တှဖွေဈတာကွောငျ့မြားလားတော့ မသိပါဘူး။ ခရစ်စမတျဈအခြိနျဆိုရငျ အမရေိကနျဂြူးတှကေို နယူးယော့ချမွို့ရဲ့ Chinatown (တရုတျတနျး) မှာ အမြားဆုံး တှနေို့ငျပါတယျ။
ဒီအခြိနျမှာ တခွားဆိုငျတှကေ ပိတျပမေဲ့ တရုတျစားသောကျဆိုငျတှကေ ဖှငျ့နသေေးတာကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ခရစ်စမတျဈခြိနျဆိုရငျ အမရေိကနျဂြူးတှကေ တရုတျနဲ့ အနောကျတိုငျးပုံစံရောနှောနတေဲ့ ဟငျးလြာတှကေို စားကွတယျဆိုရငျတော့ မမှားနိုငျဘူး ထငျပါတယျနျော…
ဒီနိုငျငံမှာတော့ ခရစ်စမတျဈ ညစာကို အမြိုးသားတှကေ အမြိုးသမီးတှကေို ဝယျကြှေးကွပါတယျ။ ညစာစားပွီးတဲ့အခါမှာ ရိုးရာအနနေဲ့ ဝလေငါး အဆီကို စားကွပါတယျ။ ဝလေငါးအဆီရဲ့ အရသာက အုနျးနို့လို အရသာမြိုးဖွဈပွီးအရမျးမာလို့ ဝါးစားလို့မရဘဲ ဒီအတိုငျးမြိုခကြွရပါတယျ။ နောကျထပျအစားအစာတဈခုကတော့ Kivaik ဆိုတဲ့ ဟငျးတဈမြိုးပါ။ ဒီထူးဆနျးတဲ့ဟငျးက auk ဆိုတဲ့ ငှကျကလေး အကောငျ ၅၀၀ ကနေ ၃၀၀၀ လောကျကို အရခှေံဆုတျပွီး ပငျလယျဖြံသားရထေဲ လနဲ့ခြီ ထညျ့သိမျးထားရတဲ့ အစားအစာမြိုး ဖွဈပါတယျ။
ဆှီဒငျမှာတော့ အိမျရှငျမတှေ အလုပျရှုပျသကျသာစမေယျ့ Game ဆိုတဲ့ စညျသှပျဘူးကို စားကွပါတယျ။ ခရစ်စမတျဈညမှာ စားလရှေိ့တဲ့ ဟငျးလြာတှဖွေဈတဲ့ ကွကျဥမှကွေျော၊ အစာသှပျမုနျ့၊ အသီးအရှကျဟငျး ကနေ ပူတငျးအထိ အကုနျလုံးကို တဈလှာခငျြးစီထညျ့ပေးထားပါတယျ။ အဆငျပွလေိုကျလခွေငျးနျော။
စာဖတျရငျး ဗိုကျဆာသှားလားဟငျ… ယောငျးတို့ အကွိုကျဆုံး ခရစ်စမတျဈအစားအစာလေးကို လညျးပွောပွခဲ့ဦးနျော။
စမျးခြောငျးသူ ခိုငျဇာ (For Her Myanmar)
Tags: christmas, Country, dinner, Food, Knowledge, Tradition, World
Khaine Zar Lin December 24, 2018